ကျော်မြင့်လေး - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဦးကျော်မြင့်လေး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အာရှလူငယ်အစည်းအရုံးကို ၁၉၄၂၊ ဇွန်-၂၈ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က အမည်အပြည့်အစုံ မှာ အရှေ့အာရှတိုက် လူငယ်များအစည်းအရုံး (ဗမာနိုင်ငံ) ဖြစ်ပါသည်။ ဦးကျော်မြင့်ကလေးသည်ပါလီမန်ခေတ်တွင် ဝန်ကြီး အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အာရှလူငယ်အစည်းအရုံး၏ ဥက္ကဋ္ဌမှာ ပုဂံဦးဘဂျမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဦးဘဂျမ်းခေါင်းဆောင်ပြီး ဦးကျော်မြင့်ကလေး၊ မစ္စတာတီကေဘွန်း၊ ဦးဇော်ဝိတ်၊ သခင်ခင်အောင်၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်၊ သခင်ညီလေး စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ဦးကျော်မြင့်လေး (မွေးဖွား. ၁၈၉၈ - သေဆုံး. ၁၉၈၈) အား ကျနော် ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ဖူးသည်မှာ စစ်အတွင်း ဂျပန်ပြည်၌ သင်ကြားနေစဉ်၊ ဦးကျော်မြင့်လေးက အာရှလူငယ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဂျပန် အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ လာရောက်စဉ်က ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ ပညာတော်သင်များ အနက် အာရှ လူငယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦး၊ ကိုမောင်မောင်စိုးနှင့် ကိုထွန်းအုန်တို့ ပါရှိပါသည်။ ထိုစဉ်က ဂျပန်စာနှင့် စကား အကျွမ်းကျင်ဆုံး ကျောင်းသား အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၎င်း၏ ညီ ကိုဟန်တိုးနှင့် မြို့မ ကျောင်းနေဖက် အဖြစ် လည်းကောင်း ကျနော့်ကို ဦးကျော်မြင့်လေးက ခင်မင်ရင်းနှီး သွားပုံရပါသည်။ ဦးကျော်မြင့်လေးသည် ဒိုင်အိုကျောင်းထွက် ဖြစ်ရာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား ပြောဆိုရော၊ စာ အရေးအသားပါ ကျွမ်းကျင်သဖြင့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၌ မိတ်ဆွေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ၎င်းထံမှ အကူအညီ ရယူ သင်ကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ဦးကျော်မြင့်လေး ဂျပန်၌ ရှိစဉ်ပင် အဓိပတိ ဒေါက်တာဘမော်နှင့် အဖွဲ့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ လူငယ် ခေါင်းဆောင်နှင့် နိုင်ငံတော် အဓိပတိတို့ အကြား ဆက်ဆံမှု မပြေလည်ကြောင်းကို ကျနော်တို့ ချာတိတ်များ သတိပြုမိပါသည်။ ဒေါက်တာဘမော်က လူအများရှေ့တွင် ဦးကျော်မြင့်လေးအား မောင်ကျော်မြင့်လေး ဟု ခေါ်၍ အသက်ငယ်သော ၎င်း၏တူ ကိုညွန့်ဟန်အား ဦးညွန့်ဟန်ဟု ခေါ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် အာရှ လူငယ်နှင့် တွဲထားသော ဂျပန် အရာရှိ တဦးက ဒေါက်တာဘမော်အား လုပ်ကြံမှုတွင် ပါဝင် ပါသည်ဟု ကောလာဟလ တခု ထွက်လာပြီး ကျနော်တို့ ဂျပန် မလာခင် သင်တန်းပေးသော ဆရာမိုဒါကို စွပ်စွဲလေသည်။ နောက်မှ စင်ကာပူမှ လာသော အခြား ဂျပန် ဆရာ တဦး ဖြစ်နေကြောင်း အာမခံ၍ ၎င်းအားလည်း လအနည်းငယ် သင်္ကန်း ဆည်းခိုင်းလေသည်။
ဦးကျော်မြင့်လေးအား နောက်တကြိမ် တွေ့သည်မှာ ၁၉၅ဝ ခုနှစ်၊ ၎င်းက ဦးနု အစိုးရ အဖွဲ့တွင် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီး အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် ဖြစ်၏။ ကျနော် အကျိုးဆောင် အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာ ပညာတော်သင်များ အသင်း ညစာစားပွဲသို့ သူလာစဉ် ကျနော် ဘာလုပ် နေသနည်းဟု မေး၏။ ကျနော် လန်ဒန် တက္ကသိုလ် ဘောဂဗေဒ ဌာန၌ နည်းပြ လုပ်နေသည်ဟု ပြန်ကြားလိုက်၏။
နောက်နှစ်လ အကြာ အမျိုးသား စီမံကိန် ဒုတိယ အတွင်းဝန် ဦးဘငြိမ် DWPP သို့ ဝင်ပြီးနောက် ဦးကျော်မြင့်လေးသည် သူဥက္ကဋ္ဌ လုပ်သော အမျိုးသား စီမံကိန်း ဘုတ်အဖွဲ့၌ စီးပွားရေး သုတေသန အရာရှိငယ် အဖြစ် ခန့်ထားလေသည်။ သူက ဘုတ်အဖွဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိ အလုပ် ခန့်ထားရန် အဆိုပြုချက်ကို နောင်အခါတွင် ဖတ်ရှုခွင့်ရရာ ချောမောသော အဂ်လိပ်စာဖြင့် အလွန်တိကျသော အဆိုပြုချက် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းအချိန်၌ သူ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး မြန်မာ့အလင်း ဦးတင်နှင့် မြန်မာ ပညာတော်သင်များ အသင်းက အောင်မြင်စွာ တောင်းဆို ရရှိပြီး ဖြစ်သော နိုင်ငံခြားဘွဲ့ ရရှိသူတို့အား ပေးအပ်သော ငါးနှစ်တိုး လစာကိုလည်း ကျနော် ရရှိခဲ့ပါသည်။
ကျနော်သည် ဦးကျော်မြင့်လေး ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်သော စီးပွားရေး ကောင်စီ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်၍ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြုစုရပါသည်။ သို့သော် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက အမြဲတမ်း သဘာပတိ လုပ်သောကြောင့် ကောင်စီသည် စီးပွားရေး ကဲဘိနက် အဖွဲ့ သဖွယ် ဖြစ်နေပါသည်။ ကျနော်၏ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရသည် ဖြစ်ရာ၊ ကျနော်က ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘဆိုင် (ဖဆပလ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်း) ထက် ဥက္ကဋ္ဌကို ပိုမို တွေ့ရှိခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန် အခါမျိုး၌ ဦးကျော်မြင့်လေးက ဖဆပလ၏ စီးပွားရေး ပေါ်လစီတို့သည် ဗြိတိသျှ လေဘာ အစိုးရနှင့် ဆင်တူသော်လည်း ကွန်မြူနစ် ပါတီတို့၏ အန္တရာယ်ကြောင့် ထုတ်ဖော် မပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောပါသည်။
နောက်တကြိမ် ဦးကျော်မြင့်လေးအား တွေ့ရသည်မှာ ရန်ကုန် ဗဟိုထောင်ကြီး အတွင်း၌ ဖြစ်ပါသည်။ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီး အဖြစ် တရုတ်လူမျိုး AH Fong အား အဂတိ လိုက်စား၍ မိုင်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးသည် ဆို၍ အတွင်းဝန် အိုင်စီအက်စ် ဦးကျော်သိန်းနှင့် အတူ ထောင်နန်းစံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ပါတီတွင်း အာဏာလုမှု ဂယက်လည်း ပါနိုင်သော်လည်း ယောက်ဖတော်၏ကြွားဝါမှုလည်း ပါနိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်၌ ကျနော်၏ ဦးလေး တဝမ်းကွဲ ဦးဆိတ်မှာ ရန်ကုန် ထောင်ပိုင်ကြီး ဖြစ်နေရာ အခက်အခဲ မရှိပါ။ ဦးကျော်မြင့်လေးအား ဝင်တွေ့ခဲ့နိုင်ပါသည်။
ကျနော် ပါရီ၌ ဆယ်နှစ်ကြာ နေထိုင်ပြီး ပြည်တော် ပြန်သည့် အခါ လူငယ်ရေးရာ၊ နိုင်ငံရေးရာ တို့၌ လုံးပမ်း နေရ၍ အိမ်ထောင်ပြု နောက်ကျသော ဦးကျော်မြင့်လေးအား သားသမီး ရှစ်ယောက် ခြံရံလျက် ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်သည်ကို တွေ့၏။ သို့သော် နိုင်ငံရေး တခါလုပ်မိလျှင် တသက်တာ နိုင်ငံရေးမှ ခွာလို့မရ ဟူသော စကားအရ ၁၉၉ဝ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီး၌ ဦးအောင်ကြီး နာယက ပြုလုပ်သော နိုင်ငံတဝန်းလုံး အရွေးခံသော Union Nationals Democracy Party (UNDP) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့လေသည်။ အသက် ၈ဝ ကျော် ဘဝကို အားရပါးရ နေထိုင်ပြီး ဦးကျော်မြင့်လေးသည် ညင်သာစွာ ဘဝတပါး ပြောင်းလဲသွားလေသည်။
↑ DR MYINT ZAN (20 March 2020)။ The best and the ‘baddest’: remembering U Myint Thein (in English)။
↑ အတွေးအမြင် အမှတ် (၁ဝ၉)၊ ၂ဝဝ၈ ဇွန်လထုတ်မှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့ အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး ဦးသက်ထွန်းရဲ့ "ဦးကျော်မြင့်လေး" အကြောင်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျော်မြင့်လေး&oldid=536787" မှ ရယူရန်
၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၂:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၂:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။